192.168.8.200 - Ukungena komqondisi - Igama lomsebenzisi nephasiwedi
Ikheli le-IP 192.168.8.200 kubekelwe ukufinyelela esikrinini somlawuli we-router. Le IP, kanye nezinye ezifana ne-192.168.1.11, 192.168.8.1, ne-192.168.168.1, zingama-IPs omgwaqo owaziwa umhlaba wonke. Encwadini, yaziwa nangokuthi "i-Default Gateway IP."
Ikheli le-IP lisukela ku-192.168.0.0 kuze kube ngu-192.168.255.255
Ikheli le-IP njenge 192.168.0.0 kanye ne 192.168.255.255 kuyisabelo samanethiwekhi asendaweni achazwe yi-Local Area Network LAN. Lapho igajethi ixhumana ngokuhlanganyela ngaphandle kokungena kwi-inthanethi lenethiwekhi yomuntu siqu iyakhiwa. I- 192.168.8.200 amakheli athola indawo ehlangene nebhokisi le-inthanethi, ikhompyutha ku-LAN, noma igajethi ehlukile kunethiwekhi.
Kungokungena ngemvume kwe-IP okugcinelwa ama-routers angenantambo noma ama-modem. Kubha yekheli ngokukhipha 192.168.8.200 kusiphequluli uzothola ukufinyelela kumngcele we-admin we-router. Kakhulu i-192.168.8.200 isetshenziswa ngabenzi abanjengo-Asoka. Akuyona nje i-IP ejwayelekile yomuntu siqu ye-router. Kunenqwaba yama-IP ahlukahlukene ngokwesibonelo 192.168.2.1, 192.168.0.1, or 192.168.1.1 ezazisetshenziselwa ukufinyelela kuphaneli yokulawula ye-Power line Access Point. Le IP ejwayelekile ibizwa ngokuthi yi-Default IP Gateway.
Ukuze usethe kabusha i-PW ngo-192.168.8.200
Ukuphela kokufanele ukwenze ukusetha kabusha imodemu. Lokhu kungenziwa kalula ngokucindezela iswishi yokusetha kabusha ngemuva noma phansi kwemodemu. Uma ubambe iswishi encane imizuzwana engama-20, (udinga ukwenza lokhu ngokusebenzisa i-toothpick), bese imodemu ibuyiselwa esimisweni sefektri.
Mane nje ukhumbule ukuthi lapho imodem yakho ikhona Setha kabusha, uzolahlekelwa ukuxhumeka kwakho ku-inthanethi. Ngakho-ke kuyalulekwa ukuthi uthathe usizo lochwepheshe ngendlela.
Uma unolwazi oluncane kakhulu, sincoma ukuthi kufanele uthathe usizo kothile onolwazi olunjalo.
The 192.168.8.200 Ikheli le-IP linikezwa yi-Consortium GARR, ngele-CDIR 192.167.0.0/16. Bhala nje 192.168.8.200 noma ngokuchofoza inkinobho yenza i-traceroute.
Ngokushesha nje lapho ikheli le-192.168.8.200 libona i-router, ikhasi lewebhu lokuphatha liyatholakala kwisiphequluli se-inthanethi.
Faka https://192.168.8.200 ukuvula isibonisi sokumisa, kubha yekheli lesiphequluli. Kwezinye izimo, kuyalulekwa ukuthi kusetshenziswe i-alias ethola idivayisi kunethiwekhi.
Igama lomsebenzisi nephasiwedi ye-192.168.8.200